MOSQUIRIX, ACBỌCH EX AH EXR V ỌZỌ BANYERE MALARIA (MALARIA) - Afrikhepri Fondation
monday, Jenụwarị 18, 2021
Na-agụ: 4 min
Otu ogwu ọgwụ mgbochi iba, "Mosquirix", natara nkwado nke thelọ Ọrụ Ọgwụ na European na Fraịde. Onye izizi na ụwaọgwụ ọbụlagodi na obara, maka oge a, na-arụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụ ezigbo mbụ na ezigbo ozi ọma. Fraịdee Julaị 24, ọgwụ mgbochi ịba natara "ezigbo echiche" site na fromlọ Ọrụ Ọgwụ European (EMA). A na-akpọ ya "Mosquirix" ma mepụta ya site na nnukwu ọgwụ ọgwụ GlaxoSmithKline (GSK) iji kpuchido ụmụaka na-eto eto, ọkachasị n'Africa, na nnukwu ihe egwu maka ọrịa ahụ. Nke a bụ oge izizi emere ọgwụ mgbochi iji gbochie nje (Plasmodium falciparum, parasaiti nke ịba) ọ bụghị megide nje ma ọ bụ nje.
Malite >> Gbado anya: " Ọrịa ịba gburu nwa ọ bụla na 30 sekọnd«
Nke a "ezi echiche" apụtaghị ozugbo ahịa nke ọbara, ma mejupụtara ozi ọma nke ndị ọrịa, ọ bụ ihe mbụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ìhè tupu o kwere omume inweta nke "nkwanye" maka ojiji site na ụwa nzukọ nke ahụike (WHO).
"Kwa afọ, ihe dịka nde mmadụ 200 na-arịa ịba […] GSK na-agba mbọ ịmepụta ọgwụ mgbochi a ruo afọ iri atọ [….] Nke a bụ oge mbụ na ọbara na-adị na nje”. kwuru Elisabeth Van Damme, onye njikwa nkwukọrịta nke GSK otu na France 000.
"Afọ iri atọ nke GSK na-agbalị ịmepe ọgwụ a" (ELISABETH VAN DAMME, GSK)
GSK ebughị n'uche ịzụ ọgwụ ịba ọba na Europe, ma n'Africa, na ebe kachasị mma. Kwa afọ, ịba na-ebelata ọkara nde mmadụ gburugburu ụwa, gụnyere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'Africa.
Mana anyị kwesịrị ịkpachara anya: maka oge a, Mosquirix abụghị panacea. "Mgbochi a na-egosi nrụpụta ọrụ [iji gbochie ọrịa ahụ] rue 50%", na-akọwapụta isi nke GSK. Naanị ihe ọ na-eche bụ ụmụ amụrụ ọhụụ gbara izu isii ruo ọnwa iri na asaa na arụmọrụ ya na-ebelata mgbe otu afọ gasịrị, chetara EMA.
Nchedo "obi umeala", dika EMA si kwuo, ya mere, ma chebe ihe niile.
N’oge a na-ebipụta nsonaazụ ndị a, otu ọkachamara na nkà mmụta ọgwụ nke ebe okpomọkụ, Nick White (Mahadum Mahidol, Thailand), kwuru, sị: “N’ikpeazụ anyị nwere ọgwụ mgbochi ịba na-arụ ọrụ, mana ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka ọ na-arụ. na-ele anya na mbido ”.
"N’onwe ya, Mosquirix agaghị ekpochapụ ịba"
"Dabere na nsonaazụ nke nnwale ule ahụ, na CHMP [Kọmitii EMA maka Ngwa Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Mmadụ] kwubiri na, n'agbanyeghị oke nrụpụta ọrụ ya, uru uru / ihe egwu nke Mosquirix dị mma", kwusiri ike na Fraịde Agencylọ ọrụ Europe nke dị na London.
GSK, nke na-ezube ire ahịa ọgwụ a na '' price price '' n'etinyeghi uru, na-achọpụta na ngwaahịa ya naanị abụghị '' azịza zuru oke '' maka ịba.
Mgbochi a ga - anọchi anya "ngwa ọrụ ọzọ na ngwa agha" megide ọrịa ịba (ụgbụ anwụnta, ahụhụ, wdg), maka nke ya, Dr Fatoumata Nafo-Traoré, onye isi oche nke nzukọ mba ụwa megide ịba "Roll Back" Ọrịa ịba ”. Ewere ya iche… Mosquirix agaghị ekpochapụ ịba.
Kwa ụbọchị, ịba na-egbu ihe karịrị otu puku na narị atọ. Dabere na WHO, mmadụ 1 nwụrụ na 300 site na ịba, ọkachasị n'Africa (627%) na ọkachasị ụmụaka n'okpuru 000 (2013%).
Mona, oriọna dị mma maka Africa
Ebighebi - Elena Roerich (PDF)